Ireo emulator PlayStation 5 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Jose Alfocea | | Fampiharana Android, Emulators
Farany zoma izao! Ary raha liana amin'ny lalao video ianao dia manana andro roa mialoha izay hahafahanao manokan-tena tanteraka amin'izay tianao indrindra: milalao, milalao ary milalao. Ary raha mitady traikefa vaovao sy fahatsapana vaovao ianao dia miomàna fa anio amin'ny Androidsis dia mitondra anao izahay a nds emulator ho an'ny android y ny emulator PlayStation dimy tsara indrindra ho an'ny Android, noho izay azonao atao milalao ny lalao tianao indrindra na aiza na aiza amin'ny fitondrana fotsiny ny finday finday avo lenta aminao.
Ny PlayStation an'i Sony dia iray amin'ireo sehatra lalao video mahomby indrindra teo amin'ny tantaran'ny indostria, ary niaraka tamin'izay dia nisy ny franchise lalao malaza indrindra tamin'ny fotoana rehetra, anisan'izany ny lohateny toy ny Final Fantasy, Tekken, Tony Hawk Pro Skater, Spyro, Madden ary maro hafa. Raha nankafizinao ireo lalao ireo tamin'ny fahazazanao ary ankehitriny te-hamerina ny fiainana an'io traikefa io ianao, dia ireto ny emulator PlayStation tsara indrindra ho an'ny Android izay mety ho hitanao izao.
3 FPse ho an'ny Android
4 ePSXe ho an'ny Android
5 Matsu PSX Emulator - Multi Emu
RetroArch dia tetik'asa misokatra ary maimaimpoana tanteraka; Izy io dia iray amin'ireo emulator malaza indrindra saingy tsy emulator PlayStation irery izy io fa a emulator multi-console izay mifanaraka amin'ny saika ny zavatra rehetra azonao eritreretina. Izy io dia manana firafitra modular, izany hoe mila misintona ny rafitra tsirairay avy ianao ho toy ny add-on, izay kosa midika fa somary sarotra kokoa izy io noho ny emulator PlayStation hafa izay ho hitantsika. Na izany aza, nilaza ny manam-pahaizana fa rehefa mahafehy an'ity fampiharana ity ianao dia tsy hitady zavatra hafa intsony mandritra ny fotoana lava be. Mikasika ny modely PlayStation dia milamina izy io ary mandeha tsara.
ClassicBoy dia tonga tahaka ny emulator rehetra miaraka amin'ny fanohanana karazana console marobe ao anatin'izany ny PlayStation, Nintendo 64, GameBoy Advance, GameBoy Classic, GameBoy Color, NES / Famicom, Sega Genesis, ary SNK NeoGeo. Izy io koa dia manolotra karazana endri-javatra isan-karazany, fanohanana ireo mpanara-maso ivelany, fanaraha-maso efijery azo ekena, fanamafisam-peo ... Manome valisoa ny fiasa sasany ary mitaky ny fividianana ny kinovan'ny emulator amin'ny vidiny izay € 2,94 ankehitriny.
anefa ClassicBoy eSafidy tsara ho an'ireo mpilalao mitady emulator marobe, ny mifanohitra amin'izay, tsy dia manana endri-javatra betsaka toy ny ankamaroan'ny emulator PlayStation.
ClassicBoy - Retro Video Games Emulator
FPse ho an'ny Android
Iray amin'ireo emulator PlayStation tsara indrindra sy lehibe indrindra ho an'ny Android ny FPse; Miaraka amin'ny mombamomba azy tena azo ovaina, FP dia atolotra avy amin'ny fototra toy ny famoahana sy ny fitehirizana ny lalao amin'ny fotoana rehetra, fanaraha-maso azo ovaina, fanohanan'ny mpanara-maso ivelany sy maro hafa safidy mandroso, fanampiana ary fanampiny izany dia ho fanampiana lehibe ho anao amin'ny fampandehanana tsara ny lalao sy hiaina traikefa tsara, ohatra, ny fisafidianana ny sary tsara kokoa na ny fampisehoana tsaratsara kokoa.
FPse dia emulator voaloa izay amin'ny vidiny 2,79 euro tsy manana safidy malalaka na kinova fitsapana, fa raha tsy resy lahatra ianao dia afaka mangataka famerenam-bola.
ePSXe ho an'ny Android
ePSXe dia iray amin'ireo emulator PlayStation tsara indrindra, kinova ho an'ny Android an'ny emulator ePSXe fanta-daza ho an'ny PC; dia tena milamina ary somary mora ampiasaina noho ny hafa, mifanentana haingana be, avo lenta, manohana maody efijery fisarahana, sahaza ho an'ny smartphone sy tablette 1-4 mpilalao, misy maody mpilalao 2 amin'ny takelaka, tahiry sy enta-mavesatra, fanaraha-maso azo ovaina, sary tsara OpenGL, fanohanan'ny ARM sy Intel Atom X86 ...
Tahaka ilay teo aloha, tsy manana kinova fitsapana koa izy io, noho izany dia mila mandoa ny € 2,99 ianao amin'ny fanandramana azy, na dia tsy maharesy lahatra anao aza izy dia azonao atao ny mangataka famerenam-bola.
Developer: epsxe rindrambaiko sl
Matsu dia mitovy amin'ny ClassicBoy, a emulator multi-console mifanaraka amin'ny PlayStation, SNES, NES, SEGA Genesis, Game Gear ary ny sasany hafa. Ary na dia tsy misy tonga lafatra aza ny iray amin'izy ireo, dia miasa tsara daholo izy ireo ary milamina. Manolotra ireo fiasa mahazatra an'ny emulator izy io, ary koa kinova maimaim-poana miaraka amin'ny doka izay azonao esorina amin'ny fividianana ny kinova feno. Tsy io no milamina indrindra amin'ireo emulator PlayStation, fa safidy maimaim-poana izany raha tsy miraharaha dokambarotra ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ireo emulator PlayStation 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Ahoana ny fanovana ny fitenin'ny Android anao